Jikọọ Apple TV ọhụrụ na Mac site na iji eriri USB-C | Esi m mac
Jikọọ Apple TV ọhụrụ na Mac gị site na iji eriri Hama USB-C
Pedro Rodas kwuru | | Apple, Apple TV, Noticias
Anyị ejirila Apple TV ọhụrụ maka otu izu mgbe ịmechara unboxing nke anyị na-akọwa isi akụkọ ya. Otu n'ime ozi ọma anyị kwusara bụ na ngwaọrụ ọhụrụ a malitere iji ọdụ USB-C ọhụrụ nke anyị nwere ike jikọọ ya na Mac site na ọdụ USB-A 3.0.
Enwere ike iji njikọ ọhụrụ a weghachite ngwaọrụ ma ọ bụ rụọ ọrụ ndị ọzọ dịka nke onye ọrụ ibe anyị bụ Ignacio Sala gwara anyị n'oge ahụ, ndekọ ndekọ ọdịyo na vidiyo sitere na Apple TV na Mac.
Ọ bụ ezie na Apple ahazi usoro, karịa kpọmkwem QuickTime Player, nke mere na ọ nwere ike iwe nseta ihuenyo nke Apple TV ọhụrụ. ejikọrọ na ọdụ ụgbọ USB-C Typedị eriri a adịghị etinye ya na ngwa. Naanị eriri dị na ya bụ Lightning to USB cable maka ịchaji Siri Remote.
Na m si Mac, anyị chọrọ ịdekọ ihuenyo na ụda nke Apple TV ọhụrụ iji kọwaa ọrụ ya n'ụzọ zuru ezu na ọ bụ ya mere anyị ji malite ile anya ma ọ bụrụ na Apple n'onwe ya nwere USB-C gọọmentị USB-A USB maka ire ere.
Naanị ihe anyị hụrụ site na Apple brand bụ ihe nkwụnye ọkụ USB-C na USB-NwanyịNke ahụ bụ, ihe nkwụnye ọkụ iji jikọọ ngwaọrụ USB na nke ọhụrụ 12 nke anụ ọhịa MacBook. Ka o sina dị ihe achọrọ iji nwee ike jikọọ Apple TV na Mac bụ nwoke USB-C - USB-A nwoke.
USB Ụdị C, RAVIAD ...
NIBIKIA USB Type C USB, ...
APOKIN® USB na USB-C ...
Apple enweghị njikọ nke ụdị ya ma họrọ ime ka otu n'ime akara Belkin dị maka ndị ọrụ, nke nwere otu ụdị nke imecha dị ka Apple cables na na a price nke 19,99 euro.
Agbanyeghị, anyị nyochaala ntakịrị karịa maka na anyị chọrọ nke dị ọnụ ala karịa yana iji ojii mechaa. Branddị akara anyị hụrụ bụ Hama na ọnụahịa nke euro 14,99 na MediaMarkt. Ọgwụgwụ nke USB bụ nnọọ siri ike na nwa, kenha na agba nke Apple TV. N'ime nkọwa nke eriri anyị nwere:
Nnukwu nnyefe ọsọ nke ruru 5 Gbps
Njikọ ọla edo na-enweghị nkwụsị na kọntaktị dị ala maka nnyefe mgbaàmà echekwara.
Ugboro abụọ maka mbelata kachasị nke nnyonye aka electromagnetic.
Nchebe megide akwusila na iji igwe rụọ ọrụ dị elu.
Obi abụọ adịghị ya, n'ime nhọrọ ndị anyị ahụla, ọ dị ọnụ ala na n'agbanyeghị ọnụahịa ya, arụmọrụ ya dị ezigbo mma. Anyị ejirila ya ọtụtụ oge ugbua ma ọ na-arụ ọrụ zuru oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple TV » Jikọọ Apple TV ọhụrụ na Mac gị site na iji eriri Hama USB-C
Etu esi ehichapụ ụdị foto dị na foto
Apple ga-arụ ọrụ ya niile na Singapore site na Solar Energy